Nahomby ny dia tany Mayotte… : efa tototra ny fotoan’i Dadi Love amin’ity taona ity | NewsMada
Nahomby ny dia tany Mayotte… : efa tototra ny fotoan’i Dadi Love amin’ity taona ity
“Fety be samy love le raha”. Lohahevitry ny seho goavambe voalohany, hatolotr’i Dadi Love ho an’ireo mpankafy azy eto Antananarivo, io.
Tsy mandray “contrat” intsony i Dadi Love amin’ity taona ity…Vaovao lehibe izany, ary tsy misy tsy maniry izany ny mpanakanto rehetra. Tena feno tanteraka tokoa mantsy ny fandaharam-potoany hatramin’ny faran’ny taona 2018 ka tsy mandray fifanarahana araka asa intsony ny mpikarakara ny tarika.
Antony iray hanentanan’izy ireo ny mpankafy, tsy handingana izay fotoana efa vita fifanarahana kosa izany, mba tsy handiso fanantenana ny rehetra. Fantatra mantsy fa hotontosaina ny 29 avrily ho avy izao ilay seho goavana, hataon’i Dadi Love eto Antananarivo. Efa ela niandrasana na izy na ny mpankafy ka hifamotoana eny amin’ny Coliseum ny roa tonta.
“Maro ireo mpankafy tsy afa-po, ka nangataka hatrany ny hisian’ny seho goavana hataon’i Dadi Love. Fandraisana anjara hatrany mantsy no nataonay teto Antananarivo fa amin’io no teny fety be”, hoy ny mpikarakara ny tarika. Mpanakanton’ny taona 2017 rahateo i Dadi Love, ary teto an-dRenivohitra no tena nisafidy izany.
Hahita an-tsehatra ireo hira vaovao, toa ny “Anaty paosy nah” ireo izay hisafidy ny ho eny amin’ny Coliseum. Tsy hadinoina kosa anefa ireo hira nahafantarana sy nampalaza an’i Dadi Love hatramin’izay.
Ankoatra izay, fantatra fa fahombiazana tsy misy toa izany ny dian’ny tarika tany Mayotte. Araka ny vaovao voaray mantsy, hipoka mpankafy avokoa ireo seho enina notanterahin’ny tarika tany, nandritra iny herinandron’ny Paska iny. Izay rahateo no tsy nahatazanana azy ireo an-tsehatra teto.